IiNdumiso Chapter88 1 Ingoma; umhobe woonyana bakaKora; kumongameli; ngosizi, ngelidambileyo. Owokuqiqa kaHeman umEzra. Yehova, Thixo ongumsindisi wam, Mhlenikweni ndikhalayo ebusuku phambi kwakho, 2 Mawuze phambi kwakho umthandazo wam; Thoba indlebe yakho ekuhlahlambeni kwam. 3 Ngokuba umphefumlo wam uhluthi zizinto ezimbi, Ubomi bam bufike kwelabafileyo. 4 Ndibalelwe kwabahla baye emhadini, Ndisuke ndanjengomfo ongenamandla 5 Ndingumkhululwa phakathi kwabafileyo, Njengababuleweyo, belele engcwabeni, Ongasabakhumbuliyo; Bona banqunyulweyo esandleni sakho. 6 Undibeke emhadini ongaphantsi, Ezindaweni ezimnyama, ezinzulwini. 7 Ubushushu bakho bundishicilele, Undithobele onke amaza akho alwayo. (Phakamisani.) 8 Ubashenxisele kude kum abo ndazana nabo, Undenze isikizi kubo; Ndivalelwe, andinakuphuma. 9 Iliso lam liyaphela yingcinezelo. Ndidanduluka kuwe, Yehova, yonke imini, Ndizolulela kuwe izandla zam. 10 Uya kuyenzela abafileyo na imisebenzi ebalulekileyo? Kuya kuvuka abangasekhoyo, kusini na, babulele kuwe? (Phakamisani.) 11 Ibaliswa engcwabeni na inceba yakho? Enzonzobileni na, ukunyanisa kwakho? 12 Yaziswa emnyameni na imisebenzi yakho ebalulekileyo? Baziswa ezweni lokulibala na ubulungisa bakho? 13 Ke mna, Yehova, ndizibika kuwe, Kwakusasa umthandazo wam wokuhlangabeza. 14 Uwuhlambelani na, Yehova, umphefumlo wam? Ubusitheliselani na ubuso bakho kum? 15 Ndilusizana, ndiyinto efayo kwasebuncinaneni bam, Ndithwele izothuso zakho, lindikhohlile. 16 Kugqithe phezu kwamukuvutha kwakho, Izidandathekiso zakho zindibhangisile; 17 Zindijikelezile njengamanzi imini yonke, Zindizungulezile kwaphela. 18 Umsusile kum ondithandayo nonguwethu; Abo ndazana nabo babubumnyama. [ Prev ]